Kooxaha Aljeriya iyo Ghana oo oo badiyay - BBC News Somali
Kooxaha Aljeriya iyo Ghana oo oo badiyay
Tartantanka Qaramada Afrika kooxo hor leh ay tartanka macsalaameeyeen kaddib markii loo awood sheegtay. Kooxihii Senegal iyo Koonfur Afrika ayaa lagu yiri garoomada ciyaaraha isaga taga, halka kooxaha Aljeeriya iyo Ghana ay ka sii qeyb qaadan doonaan wareegga rubac dhammaadka ee tartanka Qaramada Afrika.
Wariyaha BBC Cabdifitaax Ibraahim Cagayare oo ciyaarahaasi inooga soo waramaya waxa uu leeyahay Kooxda Aljeeriya ayaa gaartay guul ay u qalantay kaddib markii ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, halkaana ay 2-0 uga adkaatay xulkii Senegal, inkastoo aanay haddana u dheelin sidii looga bartay.
Ciyaartoyda Aljeeriya ayaa garoonka u soo galay si ay saddexda dhibcoodba uga qaataan kooxda Senegal, waxaana si wanaagsan ciyaarta uga dhex muuqday ciyaaryahanada ka dheela horyaalka Ingiriiska ee Riyaad Mahreez iyo Nabiil Bentaleb oo dhaliyay labada gool ciyaarta.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa goolka waxaa u bilaabay Aljeeriya ciyaaryahan Riyaad Mahreez, hasayeeshee ciyaartoyda Senegal ayaanan is dhigan oo mararka qaar waxa ay soo qaadayeen weerraro laxaad leh, inta badanna kubadda iyagaaba maamulayay.
Nabiil Bentaleb ayaa daqiiqadihii dambe ee ciyaarta waxa uu damiyay nalkii ay kooxda Senegal ku arkaysay garoonka, kaddib markii uu ka dhaliyay gool aad u qurux badan oo noqdayba goolkii quusta. Senegal ayaa bilowgii hore oo dhan niyadda ku dhisanaysay inay soo bixi karto mar haddii kooxda Ghana gool lagala hormaray, balse gool soo daahay oo uu Ghana madaxa ugu dhaliyay ciyaaryahan Ayew ayaa rajadii Senegal meesha ka saaray. Koonfur Afrika ayaa goolka la hormartay, oo ciyaaryahan Mandla Masango ayaa waxa uu u dhaliyay gool aad u qurux badan oo malaha noqon karaba goolka tartanka, iyadoo meel goolka u jirta 25 yaardi uu shabaqa cuksiiyay kubad boodboodaysa.
Ghana ayaa cidaadis saartay kooxda Koonfur Afrika oo u muuqatay inay ku qanceen goolkii ay la hormareen.
Oo 17 daqiiqo oo kaliya markii ay ciyaarta ka harsan tahay Koonfur Afrika ayaa 1-0 ku hogaaminaysay ciyaarta.
Hasayeeshee ciyaaryahanka badalka ugu soo galay Ghana ee John Boye ayaa barbareeyay, guushana waxaa sii raaciyay ciyaaryahan Ayew.
Guushaasina waxa ay ka dhigtay kooxdii Ghana inay ku dhamaysato kaalinta koobaad ee Group C, halka Aljeeriya oo ay isku dhibco haystaanna ay ku riixday kaalinta labaad.
Caawana waxaa dheeli doona Groupka D oo isku arki doona sidatan; Cameron waxa ay la ciyaari doontaa Ivory Coast, halka Guinea iyo Mali-na ay wada dheeli doonaan.